ग्वा ग्वा रुदैं श्रीमान आए मिडियामा, यस्तो श्रीमती त शत्रुलाई पनि नपरोस भन्छन् श्रीमान (भिडियो) – Wow Sansar
ग्वा ग्वा रुदैं श्रीमान आए मिडियामा, यस्तो श्रीमती त शत्रुलाई पनि नपरोस भन्छन् श्रीमान (भिडियो)
January 29, 2021 120
उदयपुर । प्रेम राई । उनको घर उदयपुरको गाईघाटमा पर्छ । उनले २०६४ सालमा आफ्नै गाउँठाउँकी चिनजानमा रहेकी केटीसंग विबाह गरेका थिए । विबाह गरे लगत्तै उनी आफ्नी श्रीमतीको साथमा पोखरा गएका रहेछन् । तर पोखरा उनलाई फापेन । ज्याला मज्दुर गरेर खाने प्रेमका दुई सन्तान छन् । दुवै सन्तान नै छोराहरु हुन् । सुख दुःख गरेर कमाएको ९ कठ्ठा जमिन उनले ससुराको नाममा गरेका रहेछन् । तर आफ्नै ससुरा र श्रीमतीले नै प्रेमलाई प्रेम जालमा पारेर अलपत्रै बनाई छाडेको कुरा उनी भक्कानिदै सुनाउँछन् ।
श्रीमती र छोराहरुसहित प्रेम पोखरामै बस्दै आएतापनि उनी मंसिरको महिना आफ्नो बुवाको मृत्यु दर्ता बनाउनकोलागी आफ्नो घर गाईघाईट गएका थिए । त्यसपछि उनी उताको काम सकेर एक्लै पोखर फर्किए तर उनकी श्रीमती र दुई छोरा भने उतै घरमा नै बसे । प्रेमको भनाई अनुसार उनकी श्रीमतीले आएको बेला माईत जान्छु भन्ने कुरा गरेको हुनाले उनले श्रीमती र छोराहरुलाई गाईघाटमा नै छाडेका रहेछन् । त्यही मौकामा उनकी श्रीमतीले संगै सुतेको कान्छा छोरालाई ‘म गए राम्ररी बस्नु’ भनेर गएकी रहिनछन् ।
श्रीमतीले चालेको यो कदमले प्रेम अहिले निकै नै टुटेका छन् । उनले आफुले खाई नखाई गरी कमाएको जग्गा जमिन पहिला नै ससुराको नाममा बनाएको हुनाले अहिले उनी पुर्ण रुपमा सुकुम्बासी भएको भन्दै भक्कानिन्छन् । भन्छन्,‘सोझो भएको हुनाले मलाई मेरै श्रीमतीले लुटेर गई । उसैले जग्गा किन्ने बेला बुवाको नाममा गरिदिऊँ केही हुँदैन भनी र मैले पनि विश्वासले ससुराको नाममा गरिदिएको थिएँ । त्यो मेरो ठूलो गल्ती हुन पग्यो ।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
रुँदै उनी अगाडी भन्छन्,‘यो उमेरमा श्रीमती त छैन छैन साथमा आफुले धौ धौ जोडेको सबै सम्पत्ति पनि छैन ।’ प्रेम राईको यो कुरा सुन्दा जीवनमा कसैलाई विश्वास गर्न नसकिने समय बनेको छ यो । प्रेम दुःखी हुनुमा एउटा अर्को कारण पनि छ । उनलाई उनकी श्रीमतीले यस्तो अवस्थामा छाडेर गईन् कि जुन अवस्थामा प्रेम स्वयम् बिरामी भएका थिए । कोहीपनि बिरामी हुँदा हालखबर सोधेर तातोपानी दिने मान्छे नै ईश्वरको रुपमा हुन्छन् । तर उनी त श्रीमती थिईन् । श्रीमतीले नै त्यस्तो अवस्थामा छाडेर गएपछि कस्को मन नरोला र ? त्यसैले प्रेमको पनि मन रोएको छ । भिडियोसहित
Prevयस्तो ड’र ला’ग्दो सेतिको पुलबाट किन हा’ म फाले ५० बर्षीय जितबाहदुरले ?भिडीयोमा हेर्नुहोस
Nextफेसबुकमा माया बसेको प्रेमिको एउटा खु,ट्टा छै,न भन्ने थाहा पाएपछी पनि छाडिन्न प्रेमिकाले (भिडियो)
मामाको बिहेमा आएका भान्जाको नालामा डुबेर मृत्यु
आज धान्य एवं योमरी पूर्णिमा मनाइँदै, यस्तो छ परम्परा
बिहे गरेर अमेरिका लैजाने भन्दै दुइ युवतीको अनाैठो धन्दा !
मलाई बचाउनुहोस् …. १४ बर्से नेपाली चेली जिबन र मृ*त्यु संग लडिरहेकी छिन् हेर्नुहोस् भिडियोमा
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (4015)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1492)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1248)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1190)
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (1171)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1156)